सिन्धुपाल्चोकमा फुटपछिको एमाले : मौन बस्दा ओली, टाउको गन्दा नेपाल - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ सिन्धुपाल्चोकमा फुटपछिको एमाले : मौन बस्दा ओली, टाउको गन्दा नेपाल
सिन्धुपाल्चोकमा फुटपछिको एमाले : मौन बस्दा ओली, टाउको गन्दा नेपाल
Sindhu Khabar शुक्रबार, २०७८ भदौ ११ / ११:१४
चौतारा । यसअघि नेकपा एमाले सिंगो हुँदा ‘ब्रान्डेड’ नेताहरुले भरिएको सिन्धुपाल्चोकमा माधव नेपाल पक्षधर बलियो रहेको एमाले भित्रकै आन्तरिक राजनीतिले पटक पटक पुष्टि गर्दै आएको छ । अहिले नेपालले ओलीसँग छुट्टिएर नेकपा (एकिकृत समाजवादी) दल गर्दा गर्दै राजनीतिको नयाँ मैदानमा प्रवेश गरेपछि भने त्यो पुरानो तथ्य यतिबेलासम्मका लागि एउटा कथा जस्तो मात्रै बनेको छ ।
नेताहरु मौन बस्दा कुनै सिनारियो ठ्याक्कै देखिएको छैन ।
केही राजनीतिक विष्लेषकले पटक पटक भन्दै आएका छन््, ‘एमाले भित्र केपी भन्दा माधवकै बोलवाला छ सिन्धुपाल्चोकमा । र, त्यो धेरै पटक सिन्धु एमालेको राजनीतिमा सतहमै देखिएको तथ्य हो ।
तर, अहिले नेकपा एमाले दुई फँक्लेटा हुँदा बलियो मानिएको माधव पक्षधर सिन्धुपाल्चोक मौन देखिएको छ । यसअघि माधव भन्नेहरुले अहिले मुख खोलिसकेको अवस्था छैन ।
यसअघि पनि पनि सिन्धुपाल्चोक नेकपा एमाले भित्र माधवकै बाहुल्यता रहेको पुष्टाईं भइसकेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा संसद विघटनपछि विभाजनमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा साविक एमालेका अधिकांश नेताहरुले नेपाल नै रोजेका थिए । त्यतिबेलाको अवस्थाको राजनीतिक समीकरणले माधव समूह नै बलियो देखिए पनि अहिलेको पछिल्लो संकेतले नेपालका लागि खतरा हुन सक्ने पनि देखिएको एक जिल्ला नेता बताउँछन् ।
त्यो समय थियो । केन्द्रीय नेताहरु अमृतकुमार बोहरा, अरुण नेपालसहित अधिकांश प्रदेशस्तर र जिल्लास्तरका नेताहरु नेपाल खेमामा खुलेका थिए । पूर्व साँसद कृष्णराज ओलीतिरै छन् । पूर्व साँसद सुभाष कर्माचार्यसहित जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाल माधव निकट मानिन्छ ।
स्रोत भन्छ–‘अमृत बोहरा र अरुण नेपाल नखुलेकै कारण अन्य नेताहरुलाई पार्टी छान्न सकस भएको हो ।’
त्यतिबेला शेरबहादुर तामाङ र दावा तामाङ मन्त्री पद पाउने भएपछि ओलीसामू झुकेका हुन् । शेरबहादुर केही दिन माधव पक्षमै रहे पनि फेरि मन्त्री पाउने भएपछि उनी ओली निकट पुगेका हुन् । ओली पक्षमा खुल्ना साथ उनले केही दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री पनि पाए ।
सिन्धुपाल्चोकमा ओलीतिर देखिएका प्रदेश सांसद सरेश नेपाल, अर्का नेता हस्त पण्डित लाई चिनिन्छ । होमनारायण श्रेष्ठ र डोल्मा तामाङ जिल्लास्तरका ओलीपक्षीय नेता हुन् । पहिले ओलीका खरो समर्थक मानिने प्रदेशस्तरका नेता सोम सापकोटा भने अहिले माधव पक्षमा खुलेर लागेका छन् । उनीसँगै राष्टिय सभा सदस्य सिंहबहादुर विक पनि माधवकै साथमा छन् ।
ओलीले संसद विगठन गर्दाताका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ माधव समूहमै थिए भने उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा ओली पक्षतिर लागेकी थिइन् ।
जनप्रतिनिधिमा ओली पक्षमा जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र लिसंखुपाखर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हेमगंगा मोक्तान मात्रै रहेका थिए । बाह्रबिसे नगरपालिका मेयर–उपमेयर निम्फुञ्जो शेर्पा, सुशीला पाख्रिन, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष भूपेन्द्र श्रेष्ठ, दुर्गा नेपाल, लिसंखुपाखरका अध्यक्ष कमल नेपाल, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष केदार क्षेत्री, कमला श्रेष्ठ, जुगलकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ, मेलम्ची नगरपालिका मेयर–उपमेयर डम्बरबहादुर अर्याल, भगवती नेपाल र पाँचपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष टासी लामा र सुनिता अधिकारी माधव पक्षमा देखिएको भएपनि उनीहरु समेत अझै केही बोलेका छैनन् । जसमा चार वडाध्यक्ष मात्रै ओली समूहतिर त्यतिबेला देखिएको हो । १२ गाउँपालिकामा रहेको पार्टी कमिटी नेताहरु पनि ९० प्रतिशत जसो माधवतिर देखिएको थियो ।
यो समिकरणले देखाउँछ, सिन्धुपाल्चोकमा माधव पक्षकै हालीमुहाली छ । र, यसरी नेताहरुको टाउको गन्दा माधव पक्ष देखिए पनि अहिले चुपचाप बस्नुले ओलीतिरै हुन् भन्ने सामान्य कार्यकर्तालाई लागेको बुझ्न सकिन्छ । उसो त सूर्य चिह्नका लागि पनि चुप बसेको हुन सक्ने एकाथरिको विश्लेषण छ । तर, पार्टी फेर्ने समय अझै रहेकाले नेपाल पक्ष ह्वात्तै बढ्ने आँकलन सिन्धुपाल्चोकको राजनीति बुझेकाहरुले गरेका छन् ।
सिंहबहादुर विक नेपाल क्याम्पमा
सिन्धुपाल्चोकमा जनप्रतिनिधि किन मौन ? के सबै ओलीतिरै हुन् ?
ट्याग : #fea